Somaliland: Madaxweyne Siilaanyo oo ku soo Laabtay Hargeysa
Home Somali News Somaliland: Madaxweyne Siilaanyo oo ku soo Laabtay Hargeysa
Madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Siilaayo iyo weftigii uu hogaaminaayey oo 8 maalmood ku sugnaa Imaaraadka Carabta ayaa maanta dalka ku soo laabtay kana soo degay Madaarka Caalamiga ah ee Cigaal. Sidaas waxa lagu sheegay war saxaafadda loogu talo galay oo uu soo saaray Naasir Yuusuf “Naska”, Xoghayaha Gaarka ah ee Saxaafadda Madaxtooyada.
Madaxweyne Siilaanyo iyo wefigiisu markii ay soo cago dhigteen madaarka waxa si weyn u soo dhaweeyey Madaxweyne-ku-xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil “Saylici”, taliyeyaasha ciidamada kala duwan ee Somaliland, Wasiirro, xildhibaanada labada golle, Salaadiin, cuqaal iyo shacbi kale oo badan.
Ugu horayna waxa uu madaxweynuhu salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka mida ciidamada qaranka kadibna waxa uu saxaafadda kula hadlay qolka nasashada ee madaarka.
Ugu danbayn weftiga madaxweynaha waxa loo soo galbiyey dhinaca madaxtooyada iyadoo ay waddooyinka qaar tuban yihiin dadweyne ruxayey caleemo qoyan, sacabkana garaacayey si ay madaxweynaha u soo dhaweeyaan.
Madaxweyne Siilaanyo iyo wefitigiisu waxay Imaaraadka u socdaaleen 6-dii Juun kadib markii ay marti-qaad rasmi ah ka heleen Boqorka Imaaraadka Carabta. Inta la og yahay waxa ay la kulmeen dhaxal-sugaha Imaaradka Carabta Mohammed bin Zayed bin Sultan Al Nahyan oo uu wehelinayey ku-xigeenka Ra’isal Wasaaraha dalka ahna Wasiirka Wasaaradda Madaxtooyada Mansour bin Zayed bin Sultan bin Zayed bin Khalifa Al Nahyan.
Sidookale waxa ay la kulmeen madaxda Khalifa Foundation oo ah hay’adda caalamiga ah ee Imaaraadka Carabta u qaabilsan gargaarka iyo deeqaha caalamiga ah.
Somaliland: Cali Waran Cade Oo Digniin U Diray Xisbiyada Qaranka Somaliland , Una Soo Jeediyey
Deg Deg: Khilaafka Dekedda Berbera Oo Cirka Marayaha Iyo Shaqo Joojin Manata Si Rasmi ah Loogu Dhawaaqay Iyo Ganacsatadi Oo Farin U Dirtay Xukuumadda Siilaanyo + Muuqaal
Somaliland: Presidential Palace rebuffs Farmaajo’s calls for unity